Indlu epholileyo-indlela emfutshane ukusuka e-Oslo - I-Airbnb
Indlu epholileyo-indlela emfutshane ukusuka e-Oslo
Skiptvet kommune, Viken, Norway
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguThomas Venger Claussen
Indlwana epholileyo kwindawo ezolileyo nje malunga neyure ukusuka e-Oslo. Ikhabhinethi ibekwe ekupheleni komhombiso kwaye inombono omangalisayo weMingevannet (iGlomma's western run). I-terrace ebanzi ijonge emazantsi kwaye ilungele ukuhlalisana kunye nokuphumla.Ipaviliyoni emileyo enendawo yokuhlala kunye nesibane sobushushu yenza iingokuhlwa ezipholileyo zasehlotyeni zibe shushu ngakumbi. Indawo yangaphandle ikwaxhotyiswe ngetafile yokutyela kunye nezitulo zabantu abathandathu, iilounger ezimbini zelanga kunye ne-gas grill.
Ngaphakathi, imiphezulu ipeyintwe ngemibala ekhanyayo enika umoya wasehlotyeni. Igumbi lokuhlala kunye nekhitshi zihamba kunye, kunye nendawo yokutyela, iqela le-sofa kunye ne-TV enkulu yesikrini esisicaba (Canal Digital ngaphandle kwezemidlalo / iTV yesatellite).
Kukho amagumbi okulala amathathu ahlukeneyo, amabini kuwo aneebhedi ezakhelwe ngaphakathi:
- Igumbi lokulala 1: i-standard frame mattress 140 x 200 cm
Igumbi lokulala eli-2: ibhedi ephindwe kabini eyakhelweyo 160 x 190 cm - ubude 75 cm
-Igumbi lokulala le-3: ibhedi eyakhelwe-ngaphakathi i-80 x 190 cm - ubude be-60 kunye ne-160 cm
Indlu yokuhlambela inomnyango wayo ovela ngaphandle kwaye iqulethe i-sink, ishawa kunye ne-Cinderella yokutsha yangasese. Akukho matshini wokuhlamba.
Ilinen yebhedi kunye neetawuli AKUQULWA.Kodwa iindwendwe zethu ze-cottage zingarenta oku ukuhlala kwazo nge-euro ezingama-20 ngomntu ngamnye. Oku kufuneka kuvunyelwene ubuncinane kwiintsuku ezintathu ngaphambi kokungena kwaye intlawulo yenziwa ngo-Airbnb.
Kukho amathuba amahle okuhamba kwindawo ekufutshane kunye nokuhamba ngemoto emfutshane. Ukusuka kwikhabhinethi kuthatha malunga:
-Imizuzu eli-15 ukuya eMeieribyen, eSkiptvet (iivenkile zegrosari, thatha, kwisikhululo segesi)
-Imizuzu engama-30 ukuya e-Askim (Østfoldbadet, ivenkile, iindawo zokutyela njl.njl)
- 40 min ukuya Fredrikstad
- 60 min ukuya kumda waseSweden / Ørje
Umbuki zindwendwe ngu- Thomas Venger Claussen
Umnini-mhlaba uyafumaneka ngefowuni, kodwa uhlala e-Oslo.
Ukungena kwenzeka usebenzisa ibhokisi engundoqo enekhowudi.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Skiptvet kommune